Farmaajo oo u muuqda in uu ogolaaday Dalabkii Ahmed Madoobe | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Farmaajo oo u muuqda in uu ogolaaday Dalabkii Ahmed Madoobe
Madaxweynaha Soomaaliya oo kulan gaar ah la yeeshay Madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa lagu xiray shuruudo dhoor ah si uu u furmo shirka looga doodayo arimaha doorashooyinka ee ka dhacaya Muqdisho.
Axmed Madoobe ayaa ka biyo diiday wadahadalada uu Muqdisho u yimid hadii aan miiska lasoo saarin arinta gobolka Gedo, waxa uuna Farmaajo ku xiray shuruudo ay kamid tahay in Gedo laga soo saaro ciidamada dowlada iyo maamulka aan Jubbaland ka amar qaadan.
Sida aan wararka ku heleyno Madaxweynaha Soomaaliya ayaa bilaabay fulinta shuruudan Axmed Madoobe ku xiray , waxaana la filayaa in saacadaha soo aadan gobolka Gedo diyaarad looga soo qaado maamulka Gobolka Gedo u magacawday Dowlada Federaalka.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo Madaxweyunaha Jubbaland ayaa sidoo kale isla gartay in guddi loo saaro arinta gobolka Gedo gaar ahaan sidii looga soo saari lahaa gobolkaasi ciidankii dowlada geesay dibna loogu celin lahaa maamulka Jubbaland.
Previous articleAgaasimaha Hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Koofi oo booqday Bar-xuudeedka Qeydar ee Galguduud, Dawo Muuqaal
Next articleAhmed Madoobe oo qiray in Dhufeys kaga Jiray Muqdisho uu is difaaci lahaa hadii Farmaajo soo weeraro
Ra iisal wasare Kheyre oo markii Igu horay ka dhawaajiyey Doorashada...